အောင်ထွန်းဦး: သရဲနဲ့ လောင်းကြေးထပ်တဲ့ည
"မင်းက မကြုံဖူးသေးတော့ ဘယ်ယုံပါ့မလဲ..၊ လက်တွေ့ဆိုရင် မင်းယုံသွားလိမ့်မယ်.."
"အေး.. ငါကလည်း မင်းတို့ပြောတဲ့ အဲ့ဒီ လက်တွေ့ သရဲကို စောင့်နေတာပဲ..၊ တွေ့မှ မတွေ့တာ.."
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ သရဲအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းအခုန် လုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ထဲတွင် သတ္တိအရှိဆုံးလို့ပြောလို့ရသလို သရဲနဲ့ တစ်ခါမှ မတွေ့ကြုံဖူးသေးသည့် သက်အောင်နဲ့ ငြင်းခုန်နေခြင်းဖြစ်သည်။
"ဒါဆို ဒီလိုလုပ်…၊ ငါတို့ရပ်ကွက်ထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ညီမသုံးဖော် ဆွဲကြိုးချသေထားတဲ့ အိမ်ပျက်ကြီး သိတယ်မှတ်လား.."
"မင်း ည (၁၂း၀၀) နာရီတိတိ အဲ့ဒီခြံထဲကိုဝင်ပြီး အိမ်ရှေ့မှာ မင်းနာမည်ကို မြေဖြူနဲ့ရေးရဲလား…"
"ငါလုပ်ရဲရင် မင်းက ငါ့ကို ဘာပေးမှာလဲ…"
"တစ်လစာ စားသောက်စရိတ် အားလုံး ငါတာဝန်ယူတယ်ကွာ…"
"အေး..ကြိုက်တယ်… ငါတစ်ကယ် ရေးမရေး မင်းက ဘယ်လို သိမှာလဲ…"
"မင်း (၁၂း၀၀) နာရီထိုးလို့ အဲ့ဒီအိမ်အောက်မှာ နာမည်ရေးပြီးတာနဲ့ ငါ့အိမ်ကို တန်းလာပြီး ငါ့ကိုနှိုး၊ ပြီးရင် ငါတို့နှစ်ယောက် အတူ ပြန်သွားကြည့်မယ်.. တစ်ကယ် ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကို… မင်းလာမနှိုးရင်.. ငါ့ကို တစ်ဝိုင်းပဲကျွေး.."
"စိန်တယ်ကွာ…၊ ငါကလည်း ဒီလိုစိန်ခေါ်မယ့်သူနဲ့တွေ့ချင်နေတာ…"
"အိုကေလေ.. ဒါဆိုရင် ဒီလ လပြည့်ညမှာ ငါတို့ အစီအစဉ် စကြတာပေါ့…"
ဒီည လပြည့်ည….. ကျွန်တော် သက်အောင်နဲ့ လောင်းကြေးထပ်ထားတဲ့ည..၊ အမှန်တော့ ကျွန်တော် သူ့ဆီက တစ်ဝိုင်းစားချင်တာထက် ဒီကောင် သရဲတစ်ကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံစေချင်လို့ဖြစ်သည်။ ဒီကောင်က သတ္တိရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ တစ်ကယ်တွေ့တယ်ပဲထားအုံး.. ဘာမှ စိုးရိမ်စရာမရှိ…။ ညနေ ကတည်းက ခြံဝင်းအပြင်ဘက်ကနေ လှမ်းကြည့်ပြီးပြီ..။ ဘာနာမည်မှ ရေးထားတာ မမြင်ရသေး..၊ ဒီအတိုင်းဆို ဒီကောင် ကျွန်တော့်ကို ကွက်ကျော်နင်းဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိပုံမရ..။ အေးလေ..။ ဒီကောင်ကလည်း သရဲဆိုတာနဲ့ကို တိုးချင်နေသည့် အကောင်မဟုတ်လား…။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော် မအိပ်ပဲ ဂိမ်းစောင့်ရင်း ဒီကောင် လာအခေါ်ကို စောင့်နေလိုက်တယ်..။ သေချာပါတယ်..။ ဒီကောင်ကျွန်တော့်ကို လာကိုခေါ်မှာ..။ ခဏအကြာတော့ ခြံရှေ့က အသံတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရတယ်..။ ပြတင်းပေါက်ကနေ ကျော်ကြည့်လိုက်တော့.. လူရိပ်တစ်ခု.. သက်အောင်ပဲဖြစ်မည်..။ ကျွန်တော် အိမ်ပြင်ကို ထွက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်မြင်တော့ လိုက်ခဲ့ဖို့ လက်ဟန်ပြပြီး ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်ထွက်ခွာသွားသည်။ ဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကို လူလုံးဖမ်းလို့ မရသေး..။ ဒါပေမယ့် ဒါ သက်အောင်ပဲဖြစ်မှာပါ..။ ဒီအချိန်ကြီး ကျွန်တော့်ကို လာခေါ်ဖို့ ပြောထားတာ ဒီကောင် တစ်ယောက်တည်း ရှိတာကိုး..။ ကျွန်တော်လည်း ခပ်သွက်သွက်ပဲ သူ့နောက်က လိုက်ခဲ့သည်။
ရှေ့က ခပ်သွက်သွက် သွားနေတဲ့ သက်အောင်ကို မီအောင်လိုက်နေပေမယ့် မမီ…၊ မီဖို့ နီးကပ်လာတိုင်း ပြန်ပြန်ဝေးသွားသလိုပင်..။ ကျွန်တော်က သူ့နာမည်အော်ပြီး လှမ်းအော်ပြောလည်း စကားပြန်မပြောပဲ ခဏကြာတော့ အဆိုပါ အိမ်ပျက်ကြီးထဲ အုတ်တံတိုင်းကျော်ကာ ၀င်ချသွားတော့သည်။
ကျွန်တော် နာရီကြည့်လိုက်သည်။ (၁၂း၂၀) ထိုးပြီ..။ ဒီကောင် တစ်ခုခုတော့ ထူးနေပြီ..။ ကျွန်တော့်ကို ကြောက်အောင် တမင်သက်သက် လုပ်နေတာလားမသိ…။ ကျွန်တော်လည်း သူရေးထားတဲ့ စာလုံးကို ရေးပြီးတာနဲ့ လိုက်ကြည့်မယ်လို့ ကတိခံထားတာကြောင့် ဘာမှ သိပ်စဉ်းစားမနေတော့ပဲ ခြံထဲကို အုတ်တံတိုင်း ကျော်ပြီး ခုန်ဝင်လိုက်သည်။ အိမ်ရဲ့ စင်ဝင်အောက်မှာ ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးပြီး ရပ်နေသော သက်အောင်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်…။ ပြီးတော့ သူ့ဘေးမှာ မြေဖြူနဲ့ ရေးချစ်ထားတဲ့ နာမည် တစ်ခု…။ ကျွန်တော်နဲ့ နည်းနည်းဝေးနေသေးတာကြောင့် ဘာရေးထားသလဲဆိုတာကိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရ..။
"အောင်မယ်.. မင်းက ဟုတ်လှချေလား..၊ နာမည်တောင် ရေးပြီးပြီပေါ့…"
ကျွန်တော် စကားပြောရင်း သက်အောင်ဆီ လမ်းလျှောက်သွားလိုက်သည်။ ဒီကောင်ဘာမှ ပြန်မပြောတဲ့အပြင် ကျွန်တော့်ဘက်တောင် လှည့်မကြည့်…။
"အေးပါ..အေးပါ… ငါရှုံးပါပြီ… အရှုံးပေးပါတယ်… မင်းတစ်ကယ် သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာကို ငါလက်ခံပါပြီ…"
သက်အောင်ဆီက ဘာသံမှမကြား…။ ကျွန်တော် မြေဖြူနဲ့ ရေးထားတဲ့ နာမည်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။
"ဟာ… ဟရောင်… မင်းရေးထားတာ…၊ မင်းနာမည်လည်း မဟုတ်ပါလား…၊ ယုဝါမိုးတဲ့…… အာ….. ဒါ ဒီအိမ်က ဆွဲကြိုးချသေတဲ့ ကောင်မလေး အငယ်ဆုံးရဲ့ နာမည်ကြီးလေ…အာ…… သက်အောင်…မင်း…..မင်း..…"
ကျွန်တော် စကားမဆုံးခင်မှာပင် ကျွန်တော့်ဘက်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်လာနေသော ခုနက ရပ်နေတဲ့ သက်အောင်လို့ထင်ရတဲ့ အရာ… သက်အောင် မဟုတ်…။ သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြနေသည်လား..၊ စိတ်ဆိုးနေသည်လား.. ကျွန်တော် မသိ..။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက် ညိုပုတ်နေပြီး မျက်နှာတစ်ခုလုံး ယောင်ကိုင်း ပုတ်ပွနေပြီး ပါးစပ်ထဲက လျှာတန်းလန်းကျနေသည်။ သူ့ဆံပင်တွေက မျက်နှာပေါ်မှာ အနည်းငယ်ဖုံးအုပ်နေပြီး ရင်ညွှန့်လောက်ထိ ရှည်လျားသည်။ သူ့ဆီမှ အပုတ်နဲ့လှိုင်လှိုင်ထွက်နေပြီး ကျွန်တော်နောက်ဆုံး မြင်လိုက်ရသည်က သူမ ခေါင်းထက်မှာ ပန်ထားသည့် ခေါင်ရမ်းပန်းတစ်ပွင့်…..
ကျွန်တော်သတိရလာတော့..ဆေးရုံပေါ်မှာ…။ ဘေးနားမှာ မိသားစုတွေကော.. သက်အောင်ကိုပါ.. တွေ့လိုက်ရသည်။
"သက်အောင်…ငါ…ငါ.. ဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ… မင်းရော….."
"မင်းနဲ့ငါ လောင်းထားတာကို စိတ်စွဲပြီး မင်းဟာမင်း အိပ်မက်ယောင်ပြီး အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲသွားခဲ့တာလေ..၊ sleepwalking လို့ခေါ်ရမှာပေါ့… မနက်ကျ မင်းကို မတွေ့လို့ လိုက်ရှာတော့မှ.. ဒီထဲမှာတွေ့တာ…."
"ဟင်…ဒါဆို…မင်း…မင်းက ငါ့ဆီ မလာဘူးလား…"
"ငါမနေ့က အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးတစ်ခုထွက်သွားတာ ဒီမနက်မှ ပြန်ရောက်တာလေ…"
"ဟာ….. ဒါဆို…. ဒါဆို….. ငါ……."
"ဒါနဲ့နေပါအုံး…မင်းက sleepwalking ဖြစ်ရင် ပန်းတွေဘာတွေ ခူးတတ်သလား… ငါတို့မင်းကိုတွေ့တော့ မင်းလက်ထဲမှာ ခေါင်ရမ်းပန်းကြီး တစ်ပွင်နဲ့…"
(ကဲ….သယ်ငယ်ချင်း တို့ရေ… အခုပဲ သင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့.. ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ..။ သင့်ကို လက်ယပ်ခေါ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကို သင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်…)
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:10 AM
ဇော်မင်း အောင် August 10, 2014 at 11:16 AM
ကြည့်လိုက်မယ်နော်...။ ဟာ... တွေ့သဗျို့! အကြွေးရှင်။ ဟီး...။
ကျွန်တော်နဲ့ ကောင်မလေး သရဲ
ကိုယ့်ကို သတ်တဲ့အမေကို ပြန်ကယ်တဲ့ သား